Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka Layliska Sare ee Columbus, Kooxda Caafimaadka Kalkaaliyaha Caafimaadka ee OH Advanced
La kulan Shaqaalahayaga Kalkaaliye Caafimaad ee Sare
Aqoon, taageero iyo daryeel tayo sare leh ...
kaalmadani waxay ka caawineysaa haweenka inay ilaashadaan caadooyinka caafimaad ee saxda ah. Si loo hubiyo in bukaankeenu helaan feejignaan inta ay mudan yihiin, shaqaalaha ka shaqeeya Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxaa ka mid ah Kalkaaliyayaasha Caafimaadka ee Horumarsan (APNs).
Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee Advanced Advanced waa kalkaaliyayaal caafimaad oo diiwaangashan oo dhammeeyay waxbarashada sare ee kalkaalinta caafimaadka iyo xulashada daraasadaha caafimaadka, iyo sidoo kale kahortag. Shahaado qaran ahaan, waxay uqalmayaan inay bixiyaan adeegyo horey ay ula tacaaleen kaliya dhakhaatiirta. APNs waxay daryeelaan haweenka ku jira caafimaadka guud ee wanaagsan, iyagoo ka caawiya iyaga inay kor u qaadaan caafimaadkooda kana hortagaan dhibaatooyinka. Kuwa qaba xaalado caafimaad oo aad u dhib badan waxaa daweeya dhakhaatiirteena.
Farqiga Sare ee Kalkaaliyaha Caafimaadka
Kalkaaliye caafimaad oo horumarsan ayaa waqti badan ku bixiya bixinta waxbarashada caafimaadka, dhageysiga iyo la hadalka bukaanada walaacooda iyo filashooyinkooda ku saabsan daryeelkooda, oo ay ku jiraan foosha iyo dhalmada, iyo bixinta hagitaan ku habboon.
Ku daryeel 'taabasho shaqsiyeed' Si qaas ah, kalkaaliye caafimaad oo horumarsan wuxuu kobciyaa xiriir shaqsiyeed bukaanka taasoo ka dhigeysa inay dareemaan raaxo leh weydiinta su'aalaha iyo ka hadlida walaacyada
Daryeelka kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee heer sare ah, bukaankeenu waxay awoodaan inay ka faa'iideystaan ​​tikniyoolajiyadda la heli karo ee ka caawisa hubinta caafimaad wanaagsan, daryeel aamin ah iyo raaxo.
Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka iyo Umulisooyinka Kalkaalisooyinka
Khabiirada Kalkaalisooyinka Caafimaadka ee Haweenka maareeyaan daryeelka OB / GYN ee haweenka da 'kasta leh, iyadoo diiradda la saarayo fayoqabka, ka hortagga cudurrada iyo daaweynta cudurrada yaryar. Waxay ku takhasusaan daryeelka uurka, qorsheynta qoyska, cilladaha caadada, dayska iyo baahiyaha kale ee haweenka.
Kalkaalisooyin Caafimaad oo Umuliso ah sidoo kale maareynta daryeelka caafimaadka haweenka. Intaas waxaa sii dheer, kalkaalisooyin caafimaad oo umulisooyin ah oo shahaado haysta ayaa bixiya foosha, dhalmada iyo daryeelka umusha kadib. Daraasaduhu waxay ogaadeen in daryeelka kalkaalisada-umulisada ay tahay mid amaan ah oo shaqsi ahaaneed, taasoo dhalisay in yaraado qalliinka, episiotomies, iyo dhicis ama dhalasho miisaan yar oo dhicis ah.
APNs waxay bixiyaan taageero shucuur ah iyo sidoo kale talobixin hufan, iyadoo diiradda la saarayo fayoqabka iyo ka caawinta bukaannada inay sameeyaan xulasho xog-ogaal ah.
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, APNs:
Hel taariikho caafimaad
Samee baaritaanno jirka ah iyo baaritaanka baaritaanka jirka, oo ay la socdaan la-talin dabagal ah.
Dawee cudurrada yaryar iyo infekshannada caamka ah.
Wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaad ee taranka, oo ay ku jiraan ka hortagga uurka iyo adeegyada dhalmo la'aanta
Dalbo oo tarjun daraasadaha ogaanshaha iyo shaybaarada.
Sii daryeel caafimaad ka hor umulisooyinka shahaadada leh iyo umulisooyinka fulinaya isbitaalka, dhalmada caadiga ee siilka.
Isla markiiba ogeysii mid ka mid ah dhakhaatiirtayada haddii ay ogaadaan xaalad caafimaad oo daran.
Kor u qaadida is-daryeelida bukaanka iyada oo loo marayo la-talin, wadashaqeyn la leh dhakhaatiirta iyo kuwa kale ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka si loo hubiyo in bukaanada oo dhami ay helaan daryeel tayo sare leh.
Shaqaalaha ka shaqeeya Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxaa ka mid ah kalkaaliyayaal caafimaad oo heer sare ah (APN) kuwaas oo si heer sare ah ugu tababaran cilmiga dhalmada iyo haweenka.
Goobta Westerville Goobta Columbus Goobta Dublin